Ungabuka kanjani izinhlelo zokusebenza ezisanda kusetshenziswa ku-Android
Inicio » Izaziso » Ungabuka kanjani izinhlelo zokusebenza ezisanda kusetshenziswa ku-Android
11 Ukubukwa 0
Ungabuka izinhlelo zokusebenza ezisanda kusetshenziswa ku-Android usebenzisa amanye amaqhinga esistimu. Enye yazo wuhlu lwezinhlelo zokusebenza ezisebenza ngemuva, olukhombisa izinhlelo zokugcina ezivulwe endaweni yesikhulumi.
Enye enye indlela, lena ekhethekile kuma-smartphones e-Samsung Galaxy, ikukhombisa ukuthi uhlelo oluthile lwagcina nini ukusetshenziswa. Futhi kukhona isayithi ye-Google efaka kuhlu umsebenzi wakho weselula. Funda ukuthi ungabona kanjani ukuthi yiziphi izinhlelo zokusebenza ezigcine ukusetshenziswa ku-Android.
Izindlela ezi-3 zokubona izinhlelo zokusebenza ezisanda kusetshenziswa ku-Android
Qalisa izinhlelo zokusebenza ngemuva
Enye yezindlela ezilula zokubuka izinhlelo zokusebenza ezisanda kusetshenziswa ku-Android ukuvula iwindi ngezinhlelo zokusebenza ezisebenza ngemuva. Ukuze wenze lokhu, thepha isithonjana semigqa emithathu ngezansi kwesokunxele, noma thepha futhi uhudule ukusuka phansi ukuya phezulu (uma ukuzulazula kusebenzisa ukuthinta) ukuze uvule uhlu lwezinhlelo zokusebenza.
Izinhlelo zokusebenza zivela njalo kusukela ngesikhathi sokugcina lapho zivulwa khona ukuya kwezindala. Kuhle ukuqaphela ukuthi uma uvala noma uphoqa ukumisa uhlelo lokusebenza olusebenzayo, luzosuswa ohlwini lwamathuluzi angemuva.
Uhlu lohlelo lokusebenza olungemuva luhlala lubonisa izinhlelo zokusebenza zakamuva ezivuliwe ku-Android (Isithombe-skrini: Caio Carvalho)
Finyelela kuwebhusayithi “ye-Google Umsebenzi Wami”
I-Google My Activity yiwebhusayithi yamahhala evela ku-Google efaka kuhlu wonke umlando wakho womsebenzi kumasevisi enkampani. Lokhu kufaka phakathi i-Android nanoma yisiphi isenzo kuzinhlelo zokusebenza zesistimu yokusebenza, kusukela ekuvuleni noma ekuvaleni izinhlelo zokusebenza kuye ekususeni noma ekulandeni izinhlelo ezintsha.
Ukusebenzisa izici zekhasi, landela okokufundisa ngezansi:
Iya kokuthi “myactivity.google.com” (ngaphandle kwamakhwothi) esipheqululini sakho bese ungena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Google;
Chofoza "Umsebenzi Wewebhu Nohlelo Lokusebenza". Bese, esikrinini esilandelayo, uvule isici;
Buyela emuva kusikrini sasekhaya somsebenzi wami we-Google;
Chofoza "Hlunga ngedethi nomkhiqizo";
Khetha ibhokisi elithi “Android” bese uchofoza okuthi “Sebenzisa”;
Bona umsebenzi wakamuva kufoni yakho ye-Android, okuhlanganisa nezinhlelo zokusebenza ezisanda kusetshenziswa.
Iwebhusayithi ye-Google ikuvumela ukuthi ubuke izinhlelo zokusebenza ezisanda kusetshenziswa ku-Android (Isithombe-skrini: Caio Carvalho)
Vula izilungiselelo ze-Android (Samsung)
Amafoni e-Samsung Galaxy line anesihlungi esizinikele esibonisa izinhlelo zokusebenza ezisanda kusetshenziswa ku-Android. Vele ufinyelele izilungiselelo zesistimu, njengakusifundo esilandelayo:
Vula uhlelo lokusebenza "Izilungiselelo";
Iya kokuthi "Izinhlelo zokusebenza";
Thepha isithonjana sokumaka esinemigqa emithathu eduze kokuthi "Izinhlelo zakho zokusebenza";
Ngaphansi kokuthi “Hlunga ngokuthi”, khetha okuthi “Okwakamuva Okusetshenziswa”;
Qeda ngokuthi “KULUNGILE”.
Amafoni e-Galaxy anesihlungi sangokwezifiso sokubuka izinhlelo zokusebenza ezisanda kusetshenziswa ku-Android (Isithombe-skrini: Caio Carvalho)
Uhlakaniphile. Uzokwazi ukubona izinhlelo zokusebenza ezisanda kusetshenziswa ku-Android, kusukela kwezakamuva kakhulu kuye kwezindala. Ukukhumbula ukuthi indlela isebenza kuma-smartphones e-Samsung Galaxy asebenzisa isixhumi esibonakalayo se-One UI.
Uyithandile le ndatshana?
Faka ikheli lakho le-imeyili kwaCanaltech ukuze uthole izibuyekezo zansuku zonke ngezindaba zakamuva ezivela emhlabeni wobuchwepheshe.
I-Instagram izoba yiTikTok eyengeziwe ngalezi zindaba
I-WhatsApp ixazulule lesi sikhalazo somsebenzisi phakathi namakholi weqembu
I-Spotify iqala ukukhipha isici se-karaoke, kodwa kukhona okubambekayo
I-Netflix: I-La Casa de Papel Korea ineziqephu ezi-6 kuphela! Ngoba?
Isimemezelo sonyaka se-MEI sinomnqamulajuqu kuze kube uLwesine (30); buza imibuzo
Ngemuva kwakho konke, i-Apple Watch Series 8 ngeke ibe nokuthuthuka okuhle